National Power News:: कलाकारिता क्षेत्रमा रहेर समाज र देशलाई चिनाउनु छ ; मोडल सुजना ढकाल National Power News:: कलाकारिता क्षेत्रमा रहेर समाज र देशलाई चिनाउनु छ ; मोडल सुजना ढकाल
कलाकारिता क्षेत्रमा रहेर समाज र देशलाई चिनाउनु छ ; मोडल सुजना ढकाल
Saturday, December 29, 2018 National Power
काभ्रेपलान्चोक – सुजना ढकाल नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा आएको पाँच छ वर्ष भयो । ४०, ४५ वटा म्युजिक भिडियो र २ वटा फिल्ममा अभियन गरिसकेकी ढकाल बीचमा दुई वर्ष कलाकारिता क्षेत्रबाट टाढिइन । तौल घटाउन दुई वर्ष मिहेनत गरेकी ढकाल अव फेरि फिल्मी क्षेत्रमै जम्ने सोच भएको बताउँछिन् । धेरै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरे अव चाहिँ फिल्म खेल्न पर्फेक्स भएको छु । फिल्ममा करिअर बनाउने सोच छ । भविश्यमा राम्रो कलाकार बन्ने लक्ष्य छ ।
झापा जिल्ला जन्मिएर नेपाली म्युजिक भिडियो क्षेत्रमा बिस्तारै आफ्नो पाईला सार्दै दर्शकहरुको नजरमा पर्दै गरेकी एक मोडल सुजना ढकाल पछिल्लो समय उनि मेला महोत्सवहरुमा आफ्नो प्रस्तुति दिन अलिक बढी ब्यस्त रहेकी छिन् प्रस्तुत छ अरबिन्द्र गौतमले मोडल सुजना ढकालसँग गरेको रमाइलो कुराकानी
आज भोलि म सुटिङ तिर नै छु
त्यति धेरै नै बिजि पनि छैन । म्युजिक भिडियो आउदै छन् त्यसको लागि सुटिङ तिर नै छु ।
मैले अहिलेसम्म ४०,४५ भन्दा माथी नै म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरे
भर्खर यो क्षेत्रमा लागेको पाँच छ बर्ष भयो अब म बल्ल फिल्म खेल्न पाको भएको छु अब बिस्तारै निरन्तरता दिन्छु । म एकदम सन्तुष्ट नै छु भन्नु पर्छ आफुले रोजेको क्षेत्र भएको कारणले म धेरै खुसी छु ।
मलाई परिवारको साथ र सहयोग छ ।
सबैको साथ र सहयोग भयो भन्ने बाँच्न सकिन्छ
सुरुमा काम गर्दै गए पछी इन्ट्रेस बढदै गयो अनि लागे घर परिवारको साथ सहयोग र प्रेरणाबाट नै म यस क्षेत्रमा लागे
मलाई म्युजिक भिडियोमा काम गर्ने एकदम मन पर्छ । यस्तो नै भन्ने त छैन तर समाजमा पचने खालको भुमिका निभाएर आफ्नो कला देखाउन सक्ने एउटा नायिका जो दर्शकहरुको मन मुटुमा बस्न मन छ र सबैले चिन्ने टाईपको बन्न मन छ ।
भर्खरै २३ बर्षको भए म भन्दा माथी दुई वटा दिदीहरुको त भएको छैन मेरो कहाँ बाट हुनु अहिले नै बेला भएको छैन बिबाहको लागि धेरै समय बाँकी छ ।
अफर त धेरै नै आउछ्न तर मलाई वास्था लाग्दैन
छ कक्षा पढ्दा आएको थियो ।
० सेक्स के हो तपाईंको विचारमा ?
मेरो विचारमा सेक्स एउटा प्राकृति नियम हो ।
यो मेरो आफ्नो पर्सनल कुरा हो।
० तपाईंका केहि नेकेट फोटोहरु पनि भेटीएका थिए यस्तो कसरी भयो कसरी हुन आयो ?
यसमा म केही बोल्दिन ,
कलाकारिता क्षेत्रमा रहेर समाज र देशलाई चिनाउनु छ र एउटा सफल कलाकार बन्नु छ र आफ्नो दर्शकहरु लाई खुशी राख्नु छ ।
अहिले सबै दर्शक हरु बुज्ने हुन्नुहुन्छ । आफुलाई कति सम्म गर्दा राम्रो हुन्छ आफुले बुझुनु जरुरी छ चर्चा कमाउनको लागि अङ्ग प्रदर्सन गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन किनकि कलाकारिता क्षेत्रमा कला देखाउने हो जो सँग कला नै हुदैन त्यसले अङ्ग प्रदर्सन गर्दछ र कला भएको ले कहिले पनि अङ्ग प्रदर्सन गर्नु पर्दैन बस आफ्नो कला देखाए हुन्छ ।
अन्तमा सम्पुर्ण दर्शकहरुलाई मैले गरेको काम हेरिदिनु होला माया गरिदिनु होला मलाई हजुर हरुको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ भन्न चाहान्छु साथै तपाईं लगायत तपाईंको मिडियालाई मेरा मनका कुरा राख्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद